musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Maitiro Ekuronga uye Kuedza Gear kune Yako Backcountry Hunt?
Vanhu vanovhima kazhinji vanotoziva kuti zvingaite sei, zvisinei, kuvhima mumakomo kure nemhomho kunogona kutonyanya kushinga. Kuvhima kwekudzokera shure kunoda simba rakawanda uye moyo murefu kuitira kuti utore mutambo wako wezviroto. Pamusoro pezvo, zvinodawo kuti muvhimi asarudze kana achida kubhegi, kuenda nenyurusi kana bhiza kana kutotamisa musasa wavo kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Kunyangwe zvese zvingaite sezvinotyisa, zvinogona kukupa zvakawanda zvisingakanganwike zviitiko uye ndangariro dzekukoshesa. Naizvozvo, iyi dhairekitori yakazara ichakutsanangurira nzira yekuronga uye kuyedza midziyo yako yekuvhima yekumashure. Ramba uchiverenga!
Kuronga Yenyu Backcountry Hunting Gear
Unogona kunge uchinzwa kuremerwa izvozvi uye ungafunga kuti unoda kutora chinhu chimwe nechimwe newe kumakomo. Handizvo chaizvo. Pane zvinhu zvishoma zvakakosha kuti rwendo rwako rubudirire. Tora zvinyorwa zvezvinotevera gear zvinodiwa:
Paunenge uchienda kunovhima kuseri, bhegi rako richava shamwari yako yepamoyo asi zvinogona zvakare kupesana kana ukasakusarudzira iyo yakakunakira. Iwe unofanirwa kutenga super lightweight backpack kudzivirira kunetsa mumashure mako kana pamapfudzi.
Mabhegi akareruka, anodhura zvakanyanya. Asi kana iwe uchifunga nezvayo semari imwe chete, ichave yakakosha mari. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti inogona kutakura zvinhu zvako zvese zviri nyore, saka, unofanirwa kusimbisa huwandu hwayo usati watenga.
Izvo zvakanaka kuti utore bhegi rine akawanda ma compartments uye zipi kuti uve nechokwadi chekuti unogona kutora chero chinhu chaunoda zviri nyore uye nekukurumidza paunenge uchivhima.
Tembiricha yemasikati neyehusiku inogona kusiyanisa mumakomo uye iwe unofanirwa kurongedza zvipfeko zvako zvinoenderana. Zvakanaka zvakare kutarisa mamiriro ekunze edunhu rauchaenda sezvo zvichikubatsira kuronga zvine hungwaru.
Kazhinji, unofanirwa kuyeuka kuti zvipfeko zvako hazvifanirwe kugadzirwa nekotoni, nekuti zvinotora ziya uye unyoro. Sezvo iwe uchange uchidikitira zvakanyanya paunenge uchifamba, zviri nani kutora polyester kana chero rimwe jira rine hunyoro-wicking zvivakwa.
Iwe unofanirwa kuchengetedza mamwe matinji embatya newe nekuti anogona kutonhora nechando usiku. Zveshangu, unofanirwa kuisa mari mumabhutsu akasimba asi akasununguka uye akareruka, sezvo usingade mablister patsoka dzako kubva pakufamba mamaira panzvimbo isina kuenzana.
Zvekare, shangu dzakadaro dzinogona kukubhadhara iwe kupfuura $200, asi ichave yakakosha. Iwe unofanirwawo kudzivirira snug zvigunwe mabhokisi sezvo ivo vachizodzivirira kubuda kweropa.
Nzvimbo yako yekurara inoda kuve yakasununguka sezvinobvira kuitira kuti iwe udzorere muviri wako uye ugone kuvhima kwemaawa rimwe zuva mumamiriro ezvinhu anonetsa.
Paunenge uchironga kutenga bhegi rekurara, iwe unofanirwawo kufunga nezvezvinhu izvo zvichange zvichiitwa, sezvo zvichifanira kukwanisa kumira pamusoro pemakomo.
Pamusoro peizvi, zviri nani kuwana bhegi rinodzivirira mvura rine premium lightweight pad yekunyaradza kwakanyanya uye hupenyu hurefu.
Paunenge uchivhima muRocky Mountains, iwe zvechokwadi haudi kukwira kwemamwe maawa maviri pahwaro hwe "fungidziro" yako yakaoma kuti waona hombe hombe. Ndicho chikonzero iwe uchifanira kuronga optics yako pamwe nekuvhima kwekudzokera shure.
Iwe unofanirwa kusima mari mune yepamusoro-notch mhando mabinoculars, sezvo ivo vachikutendera iwe kuti uone padhuze pasina kutambisa nguva yako nesimba. Pamwe chete neizvi, kuisa mari mune rengefinder kunogona zvakare kukubatsira kuverenga chinhambwe, saka iwe unogona kuronga rwendo rwako zvinoenderana.
Zvose izvi zvinhu hazvitore nzvimbo yakawanda mubhegi rako, uye hazvina kunyanya kurema zvakare. Nekudaro, kana iwe uchifunga kuti kutora chiyero newe kwakakosha, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti inogona kurema zvakanyanya. Naizvozvo, kana iwe uchienda muboka kana nemumwe wekuvhima, kugovana ingave iri nyore sarudzo.
Kuedza Yenyu Backcountry Hunting Gear
Pakave nezviitiko zvakawanda nevavhimi pavanowana zvese zvekutanga-kirasi midziyo yekushanya kwavo kukuru uye vanopedzisira vaine giya rakaputsika vachivhima. Chinogona kunge chiri chiitiko chisingafadzi, saka, unofanirwa kuyedza giya rako rese nemazvo usati waenda kunovhima.
Unofanira kutarisa kana bhatiri retochi yako richida kutsiviwa kana kuti GPS yako iri kushanda nemazvo. Iwe unofanirwawo kuyedza bhegi rako uye kuongorora kana richikwana zvese nenzira kwayo, uye iwe unokwanisa kutakura huremu zvakanaka. Saizvozvo, iwe unofanirwa kunyatso ongorora imwe yako giya zvakare.
Zvakare, iwe unofanirwawo kuona kuti tende rako rekudzika musasa riri muchimiro chakakodzera, uye unogona kuiyedza nekuimisa kuseri kwemba yako kana kuenda rwendo rupfupi rwekumisasa pakupera kwevhiki neshamwari dzako. Izvi zvinokutendera kuti utarise kana zvichida kutsiviwa kana kugadzirisa, pane kukanganisa rwendo rwako rwekuvhima.
Nimrah Shiekh anoti:
Ndira 15, 2022 pa19: 55
Ndakamirira mhinduro yenyu
Kutenda & Zvido